Wet Uye Dry Vacuum Cleaner, Mhepo Inovhuvhuta - Jinqiu
Pasi Muchina (2)
Carpet Kuchenesa (4)
Mhepo Inovhuvhuta (5)
Kugadziriswa kweDombo Kwakachena Systerm
Grainte Kukweta Mumiriri
Marble Kukwidza Crystallizer
Zvigadzirwa zvedu zvinogamuchirwa nevatengi vedu zvemhando yepamusoro, mitengo yemakwikwi uye masitayera akanaka kwazvo.
Shijiazhuang Jinqiu Trading Co, Ltd. inyanzvi yekutengesa yekuchenesa muchina, maturusi ekuchenesa uye dombo rekugadzirisa system. Tinogona kupa scrubber, burner, vacuum cleaner, carpet cleaner, blower, wringer trolley, ngoro, machena uye girenayiti kutarisirwa, makorari, kugadzira uye kuchenesa zvigadzirwa.
Vatengi vazhinji vanotsvaga matsva ekuchenesa masisitimu emuno munyika dzakasiyana, kune vatengi vakasiyana isu tinogona kupa akateedzana mhinduro sekudikanwa. Parizvino isu tinotengesa kunze kwekuchenesa muchina uye ekuchenesa maturusi kuSoutheast Asia neEuropean anopfuura makore gumi.
Shijiazhuang Jinqiu kutengesa kucharamba kuchipa vatinoshanda navo nehunyanzvi hwetekinoroji uye kugutsa zvigadzirwa, kuti tiite hupenyu hwedu uye tishande nyore uye nyatso.
350L / 450L Tilt Rori –B-110A / B-110B
Marble Kukwidza Crystallizer-KLEEVER K2 / K3
34L / 46L Padivi pinda kaviri wringer trolley -H0201 0202
Tine chivimbo chekuti tichagovana mhedzisiro uye nekuvaka hukama hwakabatana pamwe nevamwe vedu mumusika uno.
China mutengesi yepamusoro epurasitiki inotsvedza
Chiedza chemavara egranite mhinduro
Chiedza chine ruvara girenayiti uye ngura dombo ese magranite eamaradhi mamiriro. Pamusoro peiyo yakajairika capillary yekumwiwa kwemvura kwegranite, nekuda kwechiedza chena chena, pachave nenzvimbo yemvura kana kusvibiswa, uye kutevedza kwemvura hakusi nyore kutsakatika. Mune ...
Nei uchisarudza kukwesha michina
Sezvo pasi penzvimbo dzekutengesera uye zviteshi zviri kazhinji machena kana maceramic matiles, akadaro marudzi epasi ane zvirevo zvakaringana zvehutsanana, mushure mezvose, iwo anomiririra mufananidzo wenzvimbo yeruzhinji. Naizvozvo, basa rekuchenesa rinofanirwa kuitwa zvine hungwaru. Zvishoma nezvishoma, ...
Iyo 20'FCL NCL Imwe Nhanho Crystallizer naBellinwax vakasvika vatengi chitoro pamberi peMuharram Mutambo zororo.
National Chemical Laboratories sekuziva kwedu NCL, kubva pakutanga kwekutanga mukupera kwema1940 vachigadzira sipo uye shampoo yebhizimusi remhuri salon bhizinesi, kune chinzvimbo chehutungamiriri nhasi muindasitiri yekuchengetedza hutsanana seyakazara-mutsetse, mupi wepasi rose ane zita. NCL ndiye ...
Chigadzirwa chimwe nechimwe chakanyatsogadzirwa, chinoita kuti ugutsikane.
SC-1500 Yakakwira-inomhanya Burnisher
Horo Kumutsidzira Machine SC-004
BD2AE-Floor Kuvandudza Mushini
BD1AE Floor Kuvandudza Mushini
BD3A Multi-basa Brushing muchina
Multi-basa Brushing muchina BD2A
Multi-basa Brushing muchina BD1A
Multi-inoshanda pasi muchina-SC002